Imbono yeMicro Studio BM-800 | Ndisuka mac
I-Micro Studio BM-800, ilula, ayibizi kwaye inomdla kakhulu ukuqala
UJordi Gimenez | | Izixhobo, Ezahlukeneyo
Ndizakuyiqala le post ngokuchaza ukuba imalunga nokubona izibonelelo kunye nomgangatho le mic yexabiso eliphantsi isinika. Ukuba ungomnye wabasebenzisi abafuna ukuqala ukurekhoda ipodcast, imisebenzi elula yokurekhoda nezinto ezinjalo le BM-800 encinci inokuba yinto elungileyo kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ungumsebenzisi onobunzima ofuna imakrofoni ethe kratya ngobuchule obuninzi njengokukhetha inzuzo kunye nabanye, le microphone ayiyiyo eyakho.
Ewe, ndiza kuqala ngokuxelela amava am ngale mic kwaye inyani kukuba andinakonwaba kumgangatho weaudio ophunyeziweyo nangona ulula ngokwenene. Ngokungafaniyo nezinye iimodeli ezincinci esinazo kwintengiso, le yeyabo bafuna Qalisa ngokurekhoda kwaye uchithe ubuncinci kuyo. Sele ndikuxelele ukuba ekugqibeleni abo bathanda ukurekhoda baphela bekhetha ezinye iindidi zeemics ukwenza ushicilelo lwabo kunye nokukhetha itafile yokuxuba ukuphucula umgangatho wokumamela ukuya kwelona liphezulu. Kodwa abo bafuna ukuqala okanye ukurekhoda iaudiyo amaxesha ngamaxesha abayidingi imali eninzi kuyo.
Eli lesibini lityala lam kwaye emva kweenyanga ezininzi urekhoda ifayile ye- podcast veki nganye Ndikunye noogxa bakhe uNacho Cuesta noLuis Padilla apho besithetha ngeApple phakathi kwezinye izinto, ndithathe isigqibo sokukhetha imakrofoni kodwa ngaphandle kokushiya ubomi bam kuyo. Ngaphambili ndenze le ngxelo yokurekhodwa kwe-podcast ngee-headphone ezinikwa yi-Apple kwi-iPhone, ii-EarPods kwaye nangona kuyinyani ukuba bandinike umgangatho olungileyo ngokubanzi bendifuna ukuthatha inyathelo eliya phambili kwaye ngoku ndisebenzisa enye yezi I-mics ekhokelela kwi-Uni ene-XLR ikhonkco kwicala le-mic kunye ne-3,5 jack kwenye Ukuqhagamshela kwi-Mac.
Sebenzisa olu hlobo lwe-mic kusoloko kucetyiswa ukuba nekhadi leaudio langaphandle elinesihlanganisi se-USB okanye efanayo (kodwa ayinyanzelekanga ukuba i-Uni-directional efana nale BM-800) nakwimeko yam ukuba sendichaze njani kule iposti ye Indlela yokurekhoda umsindo kwi-Mac, Ndisebenzise ikhadi elidala lee-headphones zeSteelseries eSiberia endinika imakrofoni kunye negalelo lentloko ngokuzimela. Kodwa ukuba awunalo ikhadi kwaye unomdla kule microphone, ungakhathazeki, yile nto ithi kwi-wikipedia malunga nolu hlobo lwendlela enye yendlela:
Ii-microphone ezingahambelaniyo okanye ezalathisa ezo zi-ethe-ethe kakhulu kwicala elinye kwaye ngokuthe ngqo andiva kwabanye.
Oku kuthetha ukuba kwimeko yale BM-800 asizukuba nengxaki kwimeko yokungabinakhadi langaphandle le-audio okanye ibhodi yokuxuba, kuba iya kubamba kuphela ilizwi lethu okanye isandi esivela kwikona ethile. Ayikuko ukuba ndiyingcali kulo mbandela kodwa ndikhangela ukungaphumeleli kuwo Ndifumene omnidirectional okanye ikwabizwa ngokuba ayisiyolwalathiso, ubuntununtunu babo abufani ngokwamahluko wee-angles zempembelelo zamaza esandi kunye nezo zimbini Ezi ziimakrofoni ezinamacala amabini, ngenxa yoko ubuntununtunu obuphezulu kumacala ahlukeneyo. Xolela abo bawuqondayo lo mbandela.
Iinkcukacha ze-BM-800 kunye nexabiso
Okwangoku, ndinokushiya kuphela imakrofoni kunye nokukucebisa ekuthengeni ukuba uqala ngokurekhodwa okulula okanye awufuni tu ukushiya imali eninzi ekuthengeni imakrofoni. Nazi iinkcukacha zeMicrosoft Studio BM-800:
Ukuphendula rhoqo 20Hz-20KHz
Ubuntununtunu: 45 dB ± 1 dB
Ubunzima beMveliso: 0.350 kg
Intambo yesinxibelelanisi se-XLR kunye ne-3,5 jack
Iyahambelana ne: Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows 98SE, Mac OS, Windows ME
Ukuba emva kokubona zonke iinkcukacha kunye nezibonelelo zale microphone elula kwaye inomdla uzimisele ukuyithenga, Iya kukuxabisa kuphela malunga ne-15 euro ukuyitshintsha kwaye ungayifumana apho uyakufumana khona ngemibala eyahlukeneyo ukongeza: mhlophe, mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka nepinki. Ngokucacileyo ayisiyo imakrofoni eneempawu zobungcali esinokuzithengela istudiyo sokurekhoda, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ngenxa yexabiso layo eliphantsi nangaphezulu kokusebenza okuhle, kulungile ukuqala ukurekhoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Micro Studio BM-800, ilula, ayibizi kwaye inomdla kakhulu ukuqala
USergio F. sitsho
Ndiyidibanise ne-pc kufakelo lwe-mic kwaye iviwe ngengxolo enkulu yangasemva xa urekhoda, ucebisa ntoni?
Phendula uSergio F
kwenzeka okufanayo nakum
URobert Puig sitsho
Ukufumana okuninzi kule microphone yi-100% kubalulekile ukuthenga ibhokisi yamandla e-phantom
Phendula kuRobert Puig
Ingxaki inokuba ngenxa yesikhundla semicro phakathi kwezinye izinto. Kwimeko yam, into ethintela ingxaki yikhadi lesandi le-USB endinalo, kodwa nokuzama ukuthoba ivolumu yokufaka kuseto kunokunceda kancinci. Ngaba uyayibeka ujonge ezantsi njengoko kumfanekiso osebhokisini?
hayi, ndiyibambe ngesandla sam ndithetha ngentla, kodwa yiza, cwaka irekhoda ingxolo yangasemva
Ingxaki kwezibhasi zitshiphu kukuba awungekhe uhlengahlengise inzuzo efanayo. Unyango lunokuba kukufumana isoftware ecoca ingxolo, kodwa ukuba ininzi iya kuba nzima.
Ndiza kujonga ukuze ndibone ukuba ndingafumana into yokusinceda ngayo.
Ewe, benza ukhetho lwesandi endilwenzileyo ukunciphisa isandi kukhetho lweemakrofoni, kwaye kubonakala ngathi yonke ingxolo ilayishiwe, kodwa ngoku kuvakala kubuthathaka kakhulu kwaye kunzima
nanzi iimpawu sitsho
Ezi ngxaki banazo ezivela kwingxolo yangaphandle, de ilizwi libe buthathaka kakhulu. Kungenxa yenqaku elinye kuphela, elingakhange likhankanywe kwinqaku. Kwaye le microphone ifuna ukusetyenziswa komthombo wamandla wama-48v.
Molweni zihlobo, enkosi ngeposi kwangaphambili.
Ndisandula ukuthenga le mic ukwenza ushicilelo lweaudio ngeMacbook Pro yam, kodwa andicacanga kwaphela malunga nokuseta ekufuneka ndikwenzile okanye izixhobo zekhompyutha endizifunayo ukuze zisebenze kakuhle. Okwangoku, ndiyazi ukuba ukuyidibanisa nokufakelwa kwe-headphone akusebenzi okanye kuyamkele njengomsindo wangaphandle kukhetho lwesandi.
Ndifundile malunga neadaptha (iRig PRE), nangona ndingazi ukuba sisisombululo na.
Ukuba kukho umntu owaziyo ngayo, ndingaluvuyela naluphi na uncedo.
Imibuliso kubo bonke,
UIrina Sternik sitsho
Molo @ toni, ndinengxaki efanayo. Ngokucacileyo andinawo amandla okuhamba. Ndiyidibanisile kwizibuko laseJack kwaye ayiniki zindaba zakhona. Uyisombulule njani? Enkosi!
Phendula u-Irina Sternik
UJoe barzz sitsho
Umbuzo omnye ndiyithengile le microphone kodwa ine-XLR enqabileyo kakhulu kwi-USB jack kuba kwicala le-XLR endaweni yezikhonkwane ezintathu izisa i-4. Isebenzisa ibhetri yangaphakathi ngokwam inokudityaniswa nomxube kunye namandla e-phantom kodwa phi Ndifumana intambo ye-XLR ngolu hlobo? Izikhonkwane ezi-4.?. Ngaba ukhona umntu onolwazi kumenzi?
Phendula kuJoe Barzz
UCarlos Paredes sitsho
Bandixelela ukuba ezi mics zitshisa iikhonsoli kunye namakhadi esandi. Yinyani?
Phendula u-carlos Paredes
Ndiyazi ukuba iposti indala, kodwa ndinombuzo, ingaba iyahambelana neWindows 8?
Iintetho zeApple TV Tech yabaphuhlisi ziya kuba ngoDisemba
I-OS X 10.11.2 beta 3 ngoku iyafumaneka kubasebenzisi be-beta yoluntu